Nin diyaarad ka hadhay oo daalac loo raacay! - BBC News Somali
Nin diyaarad ka hadhay oo daalac loo raacay!
Dhex u hadhiddu waa xeelad ay rakaabku tigidho jaban ku helaan
Shirkadda diyaaradaha Jarmalka ee Lufthansa ayaa qof rakaab ah oo diyaaradoodu ka tagtay dacwad ku soo oogtay. Hase yeeshee dacwaddu sida la moodayo uma qallafsana.
Sida ku cad qoraallada dacwadda oo Telefishanka CNN helay, shirkaddu waxay ku doodaysaa in nin rakaab ah, oo aan la magac dhebi karin sababo sharci awgood, uu si badheedha uga hadhay diyaarad uu tigidhkeeda goostay oo u kala gooshaysay Seatltle oo Maraykanka ah iyo magaalada Oslo ee dalka Norway, oo uu kaga hadhay garoonka Frankfurt oo ay ku sii hakatay.
Dacwadda nuxurkeedu waxa weeyi jawaab adag oo ay shirkadda diyaaraduhu ka bixinayso dadka caadaystay xeeladda "dhex ku hadhidda" oo rakaabku ku helaan tigidho jaban oo ay ku tagaan halka ay doonayaan.
Duulimaadyada aan tooska ahayni waxay sii maraan magaalo weyn oo kale ama mid kale oo ah xuddunta hawlaha shirkadda oo ay ku sii hakadaan. Waxaana dhacda in qofka u socda halkaasi uu tigidhku qaali ku noqdo maadaama oo qiimaha tigidhada ay shirkaduhu ku jaan gooyaan dalabka, ee aanay eegin kharashka [ waxaana dhici karta in qofku magaaladii uu doonayey diyaarad transit ku sii maraysaa ay uga jabnaato tu toos u tagaysaa].
Madaar dad badani ka dhoofayaan
Tracy Stewart oo ah tifaftiraha website-ka Airfarewatchdog.com oo BBC-da la hadashay ayaa tidhi "kaba soo qaad in shirkadda Alaska qiimaha tigidhkeeda Seattle ilaa Columbus yahay 250 doolar. Shirkadda American Airlines-na aanay duulimaadyo toos ah ku tagin Columbus laakiin qiimahaas mid ka jaban aad ku helaysi tigidh ilaa Alaska ah oo laakiin Chicago ay ku sii hakanayso."
Stewart ayaa markaa waxay iftiiminaysaa in rakaabku ay damci karaan in halkii ay ka goosan lahaayeen tigidh qaali ah oo Seatlle ilaa Chicago oo toos ah, ay door bidi karaan in ay goostaan tigidhka Shirkadda American Airlines ee ku sii hakanaysa dhexda oo ay halkaa kaga hadhaan.
" Waa goldaloolo si fudud looga faa'iidaysan karo" ayey tidhi.
Badanaa ma dhacdaa?
Khubaro ay BBC-du waraysatay ayaa yidhi "dhex ku hadhiddu" wax cusub ma aha. Laakiin waxa kordhay tirada dadka xeeladdaa adeegsada.
"Shirkado badan oo kuwa diyaaradaha ah ayaa tobannaan sano dadka u jarayey tigidho jaban oo ay ku ogolaanayaan in ay sii maraan goobaha xuddunta u ah hawlagooda si ay kharashka u dhimaan [oo rakaabka meelaha kala duan ka imanaya ay meel iskugu geeyaan ka dibna ka sii qaadaan]" ayu yidhi John Grant oo ka tirsan shirkadda talo bixinta duulimaadyda ee JG.
Khubaradu waxay sheegaan in shirkadaha diyaaradhu isha ka lalinayeen "dhex ku hadhka" mudo dheer
"Sanado badanna waxay shirkaduhu isha ka lalinayeen rakaabka dhexda kaga hadha diyaaradaha, sababtuna waa kollayba kursiga banaanaada cid bay u helayeen" ayuu hadalkiisa ku sii daray.
Hase yeeshee, dhawrkii sano ee u dambeeyey ayaa waxa soo baxay website-yo rakaabka kala taliya sida ay ku heli karaan fursado ay xeeladda dhex ku hadhidda ku adeegsan karaan.
Shirkadaha diyaaraduhuna arintaa may jeclaysan oo mid ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ee Maraykanka ayaa dacwad ku oogtay website-ka Skoplagged.com sannadkii 2014-kii waxaanay ku eedaysay in [website-kaasi gacan ka gaysanayo ]"tartan ganacsi oo aan dheeli tirnayn". Ha se ahaatee dacwaddaa waxa laashay maxkamadd ku taal Chicago oo sheegtay in aanay awood ay gartaa ku naqdo lahayn.
Shirkadaha diyaaraduhu waxay ku doodaan in xeeladdaasi khasaare lacageed u soo hoyso oo ay ka xayirto in ay kursigii qofkaasi ka hadhay ay cid kale tigidhkiisa u jaraan maadaama [oo qofku aanu sheegayn] inuu diyaaradda ka hadhayo.
Tusaale ahaan, ninka rakaabka ah ee ay Lufthansa ku oogtay dacwaddu wuxu doonayey inuu Berlin tago marka uu noqonayo, oo halkaas ayuu kaga degayey diyaaradii uu la socday ee Oslo ka tagtay ee ku socotay Frankfurt.
Shirkaddaa diyaaradaha ee Jarmalka ahi waxay ninka ku dacwaysay inuu ka baxay heshiiskii tigidhka uu ku iibsaday oo waxay doonaysaa inuu bixiyo lacag 2,300 oo doolar ah oo magdhaw ah, taas oo ay ku sheegtay in ay tahay lacagtii ay khasaartay shirkaddu markuu ka hadhay diyaaradda.
Diyaarad ka mid ah kuwa shirkadda Lufthansa
Laakiin maxkamad Berlin ku taal ayaa dacwaddaa tuurtay bishii Diisember. Af-hayeen u hadlay Lufthansa ayaa se sheegay in ay go'aankaa racfaan ka qaadan doonaan.
"Lufthansa waxay dacwaddaa ku bixinaysaa lacag ka badan inta ay khasaartay, laakiin waxay doonaysaa in ay fariin dirto" ay tidhi Stewart.
dhacdooyin hore ayaa shirkadaha qaar waxay kala noqdeen dhibcihii abaal marinta dad rakaab ah oo ay xeeladan ku qabteen.
Ma ku xumaataa xeeladani rakaabka?
Shaashad ay ka muuqdaan duulimaadyo la baajiyey
rakaabka doonaya in ay adeegsadaan xeeladdani waa inay si fudud u safrayaan, sababta oo ah shandadaha aad sidato waxa la geynayaa halka aad tigidhka u goosatay.
Waxa kale oo jirta halista ah in duulimaadkaa loo weecin karo magaalo kale hadii cimiladu xumaato ama ay yimaadaan duruufo kale oon lagu xisaabtamini.
Laakiin khubaradu waxay sheegayaan in ay xeeladdani rakaabka faa'iido u tahay.
"Way adagtahay in aad dhaliisho qof doonaya inuu kharshka uu diyaarad ku raacayo tashiilo, weliba marka hannaanka iibka tigidhada diyaaradaha ay ka muuqdaan goldaloollo [laga faa'iidaysan karaa]" ayay tidhi Stewart.